Induction Brazing Amathuluzi Engenalutho Angensimbi Engenayo I-Heater
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / Induction Brazing Amathuluzi Ensimbi Engagqwali
Isigaba: Induction Brazing Tags: ubhonce insimbi engagqwali, lokungeniswa insimbi engagqwali, ukukhwabanisa okuphezulu, Ukukhishwa kwebhondi insimbi engagqwali, I-RF ibhonce insimbi engagqwali, ubhontshisi wensimbi engenasici, insimbi engenasici yokushisa ukushisa
Induction Brazing Amathuluzi Angensimbi Engenawo Ama-RF Ukushisa Izixhobo
Ukubopha amalunga amathathu emhlanganweni we-jack prophy jet ngokushisa okufakelwe; ukuthuthukisa ukukhiqiza ukuhambisana nokunciphisa isikhathi sokujikeleza.
Incazelo Yezingxenye Nezinto
Isiqephu sekhasi lesichubekiso sensimbi elingenalutho, amashubhu amabili, i-tube support collar, ubhonce izindandatho ze-alloy, i-B1 flux
I-1400 ° F
I-DW-UHF-4.5kW RF Induction Heating Power Supply, i-inductor eyenziwe ngokukhethekile (ikhoyili)
Ukuhlolwa kokuqala kwenziwa ukusetha amaphrofayili okushisa nokushisa. Kwakunqunywe ukuthi inqubo emibili yesigaba izoletha imiphumela emihle. Ngalolu hlelo lokusebenza i-turn-four eyakhelwe ngokukhethekile, i-inductor enama-double-wound i-helical yasetshenziselwa ukuletha ngisho nokushisa ezindaweni ezihlangene. Ama-tubes amabili, i-tube support support kanye ne-piece piece bahlangene futhi babanjwa ngokuthungatha isikhashana. Izindandatho ze-alloy alloy zafakwa esikhundleni futhi ijazi elincane le-B1 flux lisetshenziselwa yonke inhlangano. Esigabeni sokuqala senqubo yokushisa, ukuphela kwebhubhu yokugcina komhlangano kwafakwa endaweni yokushisa futhi amandla okufakelwa ahlinzekwa ngemizuzwana ye-10. Esigabeni sesibili, le nhlangano yaguqulwa futhi ukuphela komhlangano kwaphela kwashiswa ngemizuzwana eyengeziwe ye-10. Khona-ke inhlangano yasuswa, yageza ngamanzi ashisayo ukuze isuse ukukhuphuka, futhi iqhume ngomile emoyeni oshisayo.
Imiphumela ephikisanayo, ephindaphindiwe yatholakala nge-power supply DW-UHF-4.5kW kanye nemijikelezo yesibili yokushisa kwe-10. Uhlanganiso ngalunye lwebhande luvalwe ngefayili
amathiphu wokukhanya kwe-carbide
Induction Brazing Brass Tube kuya ku-Brass Disk